ဘဲတူဖျံတူများ တွေ့ရှိရသော ဒေသများ
(အနီရောင် – ဒေသရင်း, အဝါရောင် – မိတ်ဆက်နယ်မြေ)
ဘဲတူဖျံတူကောင် (Platypus) သည် ငါးလည်းမဟုတ်၊ ကြက်ငှက်လည်းမဟုတ်၊ ဖျံဟုလည်း လုံးလုံးလျားလျား မခေါ်သာ၊ တွားသွားသတ္တဝါဟုလည်း မဆို နိုင်သော်လည်း ထိုသတ္တဝါလေးမျိုးတို့၏ အနေအကျင့် အသွင်အပြင်များ ရောထွေးရှိနေသည့် ထူးဆန်းသော သတ္တဝါမျိုးဖြစ်သည်။ ဘဲနှုတ်သီးကဲ့သို့နှုတ်သီးပြားပြားရှိ၍၊ ခြေချောင်းလက်ချောင်းများ အကြား အရေပြားဖြင့် ဆက်နေကာ၊ ဖျံ၏ အမွေးမျိုး၊ ဖျံ၏ အမြီးကဲ့သို့အမွေးထူ အမြီးပြားကြီးမျိုးလည်း ရှိပြန်သဖြင့် ထိုသတ္တဝါကို ဘဲတူ ဖျံတူကောင် ဒပ်ဗီး (သို့မဟုတ်) ဘလက်တီပတ် ဟု ခေါ်လေသည်။
ယင်း၏ နှုတ်သီးသည် အရေပြားဖြင့် ဖုံးအုပ်လျက်ရှိ၍၊ ထိုနှုတ်သီး၏ ထိပ်ဖျားတွင် နှာခေါင်းပေါက်များရှိသည်။ ရေအောက်သို့ငုပ်လျှိုပြီးသော် ရေအောက်မှ လည်းကောင်း၊ ရွှံ့နွံထဲမှ လည်းကောင်း၊ ပိုးမွှား၊ တီကောင် စသည်တို့ကို နှုတ်သီးဖြင့် ထိုး၍ ရှာဖွေစားသောက်ကြသည်။ ငယ်စဉ်က သွားများ ပေါက်သော်လည်း၊ မကြာမီ ထိုသွားများ ကျွေသွားကာ၊ ယင်းတို့အစား ချိုသားကဲ့သို့မာကြောသော
သွားနှင့် ဆင်ဆင်တူသည့် အချွန်များ ထွက်လာသည်။ အစာများကို ထိုချို သွားများနှင့် ဝါးစားသည်။ ခြေလေးချောင်းရှိရာ၊ ယင်းခြေတို့၌ ချွန်မြသော ခြေသည်းများရှိသည်။ ဘဲတူဖျံတူကောင် အမသည် ထိုခြေသည်းများဖြင့် မြစ်ချောင်းကမ်းပါးတွင် လိုဏ်ခေါင်းတူး၍နေတတ်သည်။ ထိုလိုဏ်ခေါင်းအဆုံးတွင် ဥများ ဥသည်။ ဥများသည် မြွေဥ၊ လိပ်ဥများကဲ့သို့အခွံပါးသည်။ ဥများမှ အကောင်ငယ်များ ပေါက်လာသောအခါ၊ မိခင်ဖြစ်သူသည် ယင်း၏ အမြီးဖြင့် အကောင်ပေါက်စ ကလေးများကို ပိုက်ထွေးပြီးသော် နို့တိုက်လေ့ရှိသည်။ အကောင်ငယ်များ ပေါက်ပြီးစအချိန်တွင် သားမွှေးမရှိသေးချေ။ ယင်းတို့သည်အသိုက်တွင် လပေါင်းများစွာကြာအောင် နေတတ်ကြလေသည်။
↑ Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M., eds. (၂၀၀၅)။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များ: မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းနှင့် ပထဝီမြေမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းကျမ်း (တတိယအကြိမ် ed.)။ ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ် ပုံနှိပ်တိုက်။ p. 2။ ISBN 978-0-8018-8221-0။ OCLC 62265494။
↑ "Ornithorhynchus anatinus" (2016). IUCN Red List of Threatened Species 2016. IUCN. doi:10.2305/IUCN.UK.2016-1.RLTS.T40488A21964009.en.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘဲတူဖျံတူကောင်&oldid=730186" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၉:၃၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။